Ngo-2016 amazinga okushisa azokwenyuka ngo-1 kuya ku-2 degrees uma kuqhathaniswa nesilinganiso | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ukushisa kakhulu komhlaba Uyaqhubeka nokwenza igxathu eliqinile futhi manje ungusosayensi wezulu odumile wethelevishini UMario Picazo, lowo oxwayise ngemiphumela emibi yokuguquka kwesimo sezulu.
NgokukaMario, amazinga okushisa azokwenyuka ngo-2016 maqondana nesilinganiso futhi bangahle bakhuphuke besuka ku-degree eyodwa baya kwamabili degrees centigrade.
Lesi sibikezelo sincike ekuhlaziyweni kwe- amazinga okushisa olwandle nokuthi banikezela ngemininingwane ethembeke ngempela yokuthi yini engenzeka unyaka wonke. Ngale ndlela, izibikezelo zikhomba ukuthi amazinga okushisa azoqhubeka nokukhuphuka njengoba kwenzekile ngesikhathi izinyanga zikaJanuwari noFebhuwari. Imininingwane ikhombisa ukuthi zombili izinyanga kube ezishisayo kunazo zonke emlandweni, ngakho-ke konke kukhombisa ukuthi intwasahlobo ngeke yehluke futhi izodla ubhedu Amazinga aphezulu okushisa.
Ezinye izazi zezulu kuleli, ezinjengoJosé Antonio Maldonado, zikhombisile ukuthi ngoFebhuwari odlule wayenazo ukukhuphuka cishe kwesilinganiso esisodwa se-Celsius ngaphezu kwesilinganiso futhi kube nezimvula ezingaphezu kwama-66% kunokujwayelekile. Zonke izazi ziyavuma ukuthi umkhuba wezinyanga zokuqala zonyaka uzoqhubeka futhi isizini yasentwasahlobo izobhekana namazinga okushisa aphakeme kakhulu kulabo okuvamise ukwenzeka ngalesi sikhathi sonyaka, eyiSpain enye yezindawo emhlabeni lapho lokhu kwanda kwamazinga okushisa kuzobonakala khona kakhulu.
Kungakho ukuguquka kwesimo sezulu kube usongo lwangempela kuyo yonke iplanethi nokwanda kwamazinga okushisa ingenye yezingozi ezinkulu kakhulu ku- lezo ezibheke umhlaba wonkana. Iqiniso elibucayi ngempela elenzayo kufanele bafune izixazululo ngokushesha okukhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Ngo-2016 amazinga okushisa azokwenyuka ngo-1 kuya ku-2 degrees uma kuqhathaniswa nesilinganiso